36 Koorsooyinka Tababarka ugu wanaagsan ee Red Hat Shahaadada si loo yareeyo Xirfadahaaga
36 Koorsooyinka Tababarka Casriga ee ugu wanaagsan ee Casriga ah si aad uhesho Xirfadahaaga
Shuraakada Tababaraha Cas ee Red Hat
36 Koorsooyinka Tababarka Tababarka ee Casriga ah ee ugu Fiican
1. Koofiyada cas - RHCSA oo ku saabsan RHEL 7
2. Koofiyada cas - RHCE on RHEL 7
3. Shirkadda Laydhka Cas
4. Redhat JBoss Maamulka Codsiga I
5. Koofiyada cas ee JBoss Management II
6. RHCSA Kursi Deg deg ah (RH199)
7. Koofiyadda cas ee OpenStack (CL210)
8. Red Hat CloudForms Maareynta Hooska Hybrid
9. Maamulaha Kumbuyuutarka Casriga ah III
10. Maareynta Kombiyuutarka Casriga ah iyo Maareynta Kaydinta
11. Maareynta Kombiyuutarka Casriga iyo Maareynta Qalabka (RH401)
12. Maamulka Koofiyada Xuduudaha 6 (RH403)
13. Muuqaalka Dhismaha Casriga ee Casriga
14. Kombiyuutarka Casriga Casriga ah iyo Maamulka
15. Koofiyadda cas ee OpenStack I
16. Koofiyadda cas ee OpenStack II
17. Red Hat CloudForms Maamulka Khibrada ee Hybrid
18. Red Hat CloudForms Hawlgallada Hydridda Hiddaha
19. Apache Qpid farriinta leh Koofiyada Casriga Shabakada Linux ee OpenStack Platform
20. RabbitMQ farriin ku socota Platform-ka OpenStack
21. Helitaanka Habboonaanta Istuudiyaanka Red Star OpenStack Platform
22. Red Hat JBoss Development Application Enterprise I
23. Kormeerka Shabakadda Hawl-gabka ee Shabeelada Cas
24. Horumarinta Horumarinta Hawlaha Adeegyada Fuse Adeega
25. Horumarka Geela ee Koofiyada Casriga ah ee JBoss Fuse
26. Abuuritaanka Codsiyada Shaqo-La-shaqaynta ee Koofiyada Casriga ah ee JBoss BPM Suite
27. Kumbuyuutarka Adeegga Gaadiidka Kala Duwan ee Koofiyadaha Casriga ah ee JBoss Fuse
28. Koofiyada casriga ah ee JBoss A-MQ Horumarinta iyo Dejinta
29. Koofiyadaha Casriga ah JBoss Fuse Tracked Track
30. Horumarinta Macluumaadka RedHat JBoss
31. Horumarinta Macluumaadka RedHat JBoss
32. Oggolaanshaha Xeerarka leh Redhat JBoss BRMS
33. Hirgelinta Redhat JBoss BRMS
34. Dhisidda Codsiyada Ganacsiga ee Casriga ah
35. Maamulka Kaararka Gatters Gifted Maamulka
Kooxda Xiriirka Tababarada Cas ee Red Hat (RHCTP) ayaa ka caawiya Red Hat inay wax u qabtaan iyo macaamiisha ay sameeyaan qorshe wax ku ool ah oo dhiirigalin leh oo muujiya kalsoonida dhabta ah. RHCTP had iyo jeer waxay sii wadaa awooda kubbadda cas ee Red Hat oo diyaarisay shakhsiyaadka khaaska ah ee khibradahooda khibrad leh. Waxaa jira barkad ballaaran oo awood leh oo si joogta ah u baahan tahay inay galaan ama sameyso caddaynta shakhsiyaadka furan ee furfuran ee furfuran oo ay ka soo jeedaan Red Hat waxay ku adkeysteen xoogaga shaqada. Kooxaha RHCTP waxay qaadataa ka dib marka barnaamijyada Red Hat wax-barashada ay muujinayaan tayada iyadoo la siinayo jawaabo diyaarinaya macaamiisha. Kooxda RHCTP waxay la shaqeeyaan Red Hat si ay u soo gudbiyaan waxqabadyo muhiim ah
Xalinta Teknolojiyada Cusub waa Shuraako Shahaadeysan ee Casriga ah. Horumarinta Teknoolajiyada Casriga ah (Shuraakada Casriga Tababaraha) ayaa bixiya Kulliyadaha Tababarka Red Hat Shahaadada Isku-xirka / iskuxiray meelaha 9 ee Hindiya: Bangalore, Chennai, Delhi, Gurgaon, Hyderabad, Kolkata, Mumbai, Noida iyo Pune.
Haddii aad dib-u-dhejisid baaxaddaada ama dhisidda awoodda cusub ee aad u iftiimisay, tani waa meesha wax walba ay bilaabanto. Calaamadaha muhiimka ah ee Red Hat Enterprise Linux®, Red Hat JBoss® Middleware, Red Hat OpenStack® Platform, iyo taasi waa cirka kaliya ee jilbaha.
Muujiso khariidadeena dhamaystiran ee koorsooyinka Tababarka Red Hat Certified iyo helitaanka koorsada adiga kuu shaqeysa.
Red Hat waxay ku dadaaleysaa dhammaan suurtogalnimada RHCSA inay tixgeliso inay qaadato ugu yaraan mid ka mid ah fasallada rasmiga ah ee rasmiga ah si ay u helaan. Ka-qaybgalka fasaladaas looma baahna, midkana wuxuu qaadan karaa imtixaan kaliya. Dad badan oo tartamaya oo wax ku ool ah kuwaas oo u yimid fasalka illaa imika awood u leh iyo warbixinta warbixinta ee fasalku u yeeshay natiijo waxtar leh.
Si loo helo keydka shahaadada RHCE, mid ka mid ah waa inuu sidoo kale u gudbiyaa Imtixaanka Agaasinka Nidaamka Cas ee Red Hat (RHCSA). Qof ayaa ku qori kara oo qaadan kara imtixaanka RHCE isaga oo aan horay u marin imtixaanka RHCSA, si kastaba ha ahaatee hubinta RHCE lama soo saari doono illaa labada shahaadooyin ay ka helaan tartame. Haddii rajo aan wali wali helin RHCSA, Red Hat waxay qaban doonaan diiwaanka imtixaanka RHCE ee ra'iisiga waxayna ku dari doonaan rikoorkaas rikoorka RHCSA codsadayaasha marka la helo wakhti dambe.
Red Hat wuxuu taageerayaa dhammaan suurtogalnimada RHCE-da in ay ka fakaraan inay qaataan ugu yaraan mid ka mid ah fasalada waxbarashada rasmiga ah si ay u qorsheeyaan. Ka-qaybgalka fasaladaas looma baahna, midkana wuxuu qaadan karaa imtixaan kaliya. Codsadeyaal badan oo wax ku ool ah kuwaas oo imtixaanka u yimid sidii imika loo ogaan lahaa waxyaabo deeqsi ah iyo warbixinta barashada ee fasalku u lahaa natiijo faa'iido leh.
Red Hat wuxuu awood u leeyahay dhammaan imtixaanka Red Hat Enterprise Performance Tuning Expertise (EX442) inuu tixgeliyo qaadashada shahaadada Red Hat Certificate of Performance (RH442). Ka qaybqaadashada fasalkaas looma baahna, sidaa darteed mid ayaa qaadan kara imtixaanka kaliya. Dad badan oo tartamaya oo fara badan oo u yimid fasalka ilaa imika loola jeedo waxqabad weyn iyo macluumaad ayaa soo sheegay in fasalka uu natiijo wax ku ool ah u ahaa.
Waayo-aragnimadu waa diyaargarowga ugu wanaagsan ee imtixaanka. Noqo siduu u dhici lahaa, xitaa shakhsiyaadka khibrada leh ee halkan jooga iyo meelo ay ku jiraan fikrado, sidaa darteed Red Hat wuxuu awood u siinayaa dhammaan suurtogalnimada RHCJA inay tixgeliso qaadashada JB248 JBoss ee Maamulayaasha I. Koorsadani waxay soo bandhigaysaa qodobbada waxayna noqon kartaa taakuleyn wax ku ool ah oo ku lug yeelata iyo hagaha muhiimka ah ee diyaargarowga imtixaanka.
Red Hat ayaa sheegaysa in rajada laga qabo in ay ku guuleysatey Maamulaha Nidaamka Red Hat Certified System (RHCSA) ama Engineerka Red Hat Certified Engineer (RHCE) ka hor inta aan lagu guda galin imtixaankan, laakin looma baahna. Fahamka fikradaha xarunta ee Java Enterprise Edition waa mid faa'iido leh, si kastaba ha ahaatee, tartamayaashu ma aha inay noqdaan kuwo injineer ama imtixaankani waxaa ka mid ah hawlaha horumarinta codsiga.
Si laguu caawiyo sameynta, goobaha imtixaanku waxay muujinayaan aagagga aad ka rajeyn karto inaad aragto daboolay imtixaanka. Goobahaasi waxay khuseeyaan labada JBoss EAP 7.
Waxay isku darsamaysaa Maamulka Laanqeyrta Cas ee I iyo II oo degdeg ah RHCSA Rapid Track Course (RH199) ayaa tilmaamaya Red Hat® Enterprise Linux®7 waxaana loogu talagalay fahmidda kuwaas oo hadda ka qeyb qaata urur weynaha Linux. Kormeerku wuxuu baarayaa khaladaadka ku qoran Red Hat System Administration I (RH124) iyo II (RH134) oo ah xawaare degdeg ah.
Maqnaanshaha mira dhalida, waa in ay fahmaan in ay diyaar u yihiin inay qaataan imtixaanka Nidaamka Nidaamka Nidaamyada Cas ee Red Hat (RHCSA).
Fiiro gaar ah: Koorsadani waxay ku ballaarantaa fahamka hadda ee fahamka ee khadka taleefanka ku salaysan qaabeynta qaab dhismeedka Linux. Ogolaansho waa in ay lahaadaan karti ay u leeyihiin in ay fuliyaan baaqyada joogtada ah ee isticmaalka qolofka, ay la shaqeeyaan doorashooyinka asaasiga ah ee aasaasiga ah, iyo in ay helaan bogag dad si ay u bixiyaan kaalmo. Ogolaansho la'aanta macluumaadkaan waxaa si weyn loogu baaqayaa in ay qaataan Maamulka Laanqayrta Cas ee I (RH124) iyo II (RH134).
Soo bandhig, samee, kuna sii wad jawi degaan oo loo isticmaalo Isticmaalka Red Hat OpenStack Platform. Koorsadani waxay muujineysaa hogaaminta qaabka loo fulinayo jawiga xisaabinta loo qaybiyey ee isticmaalaya Red Hat® OpenStack® Platform, oo ay ka mid yihiin aasaaska, dejinta, iyo taageerada.
Koorsadani waxay sidoo kale kaa caawin kartaa inaad u diyaargarowdid Maamulaha Nidaamka Isku-Duubka ee Red Hat ee imtixaanka Red Hat OpenStack (EX210).
Koorsadani waxay kuxirantahay Xawaarida Red Hat OpenStack 8.
Red Hat OpenStack II (CL210) sidoo kale waxay bilaabi doontaa in laga bilaabo maareynta OpenStack iyadoo la isticmaalayo Horizon si loo isticmaalo isku-xirka isku-hagaajinta. Xirfadaha imtixaanka ee lagu daboolay koorsada waxaa ka mid ah: diyaarinta Barnaamijka Red Hat OpenStack Platform isagoo isticmaalaya Agaasimaha OpenStack, kormeerayaasha macaamiisha, jimicsiga, dhadhanka, qaybaha, sawirrada, maamulka nidaamka, iyo duubista duullimaadka, kombiyuutarka (miisaanka iyo hoos udhaca), iyo soo saaraan sawir wax ka bedelay.
Jaantus sida loo ciyaaro qorshe hoose iyo qaabka Red Hat CloudForms. Red Hat CloudForms Maaraynta Hiddaha "Hybrid Cloud Management" ayaa ku tusaya sida loo ciyaaro naqshadeynta iyo qorshaha Red Hat CloudForms.
Red Hat® Shahaadada Khibrada ee Maaraynta Maaraynta Meelaha waa habka ku saleysan fulinta ee ku saleysan fulinta. Dadka helaya Shahaadada Casriga ee Red Hat ee Maaraynta Clouds ayaa muujisay sida loo dhigo iyo barashada in ay diraan oo ay la tacaalaan aasaaska san-galinta iyadoo la isticmaalayo Red Hat CloudForms.
Dadka haysta Shahaadada Khibrada ee Maaraynta Clouds ee Hybrid waxay ka ciyaari karaan hawlaha la socda:
Goobta Laanqeyrta Cas
Qorsheynta Red Hat CloudForms si ay ugu xirmaan ugu yaraan hal alaab-qeybiye
Ka faa'iideysiga Red Hat CloudForms si aad u fuliso hawlaha maamulka ee qaab-dhismeedka farsamooyinka
Ballaarin kartid awooddaada si aad u maamusho qaab-dhismeedka Linux iyo u diyaargarowga imtixaankaaga (Red Cross Certified Engineer (RHCE).
Red Hat® Maamulka III (RH254), oo lagu qeexay Red Hat Enterprise Linux, ® 7, ayaa loogu talagalay agaasimayaasha khibradda leh ee Linux ee haysta xaqiijinta nidaamka Red Hat Certified System (RHCSA®) ama isku dheelitirnaanta isla markaana u baahan in la ballaariyo awooddooda si loo xakameeyo qaababka Linux marka la gaaro heerka ujeedka.
Koorsadu waxay ku salaysan tahay dirista iyo kormeerida nidaamyada nidaamyada iyagoo adeegsanaya kaydinta Domain Name Service (DNS), MariaDB, Apache HTTPD, Dareemayaasha SMTP, waxay diyaarinayaan diiwaangelinta Nidaamka Nidaamka Nidaamka NetwS (NFS) iyo Isticmaalka SMB (SMB), barnaamijyada iSCSI iyo bartilmaameedyada , kor u qaadista abaabulidda iyo qaababka qoryaha, iyo isticmaalka qoraalka Qeybta Bash ee dhismaha si loo riixo, loo naqshadeeyo, loona baaro qaab-dhismeedka. Iyada oo la adeegsanayo cinwaanada iyo sheygaarka gacmaha, fahamyada rasmiga ah ee rasmiga ah ee RHCSA ayaa loo soo bandhigi doonaa dhammaan awooda ay ka kooban tahay imtixaanka injineerada Red Hat Certified Engineer (RHCE) (EX300).
Soo koob oo u gudbin farabadan helitaanka sare. Qalabka isku-dhafan, ee gacansiinta Red Hat®® (Highly Level Clustering) (RH436) wuxuu muujinayaa maamulka kaydka, khadadka casriga ah ee Red Hat, iyo naqshadeynta la wadaago oo ay bixiso Red Hat Global File System 2 (GFS2) iyo Red Hat Gluster Storage .
Waxay u samaysay maamulayaasha qaab-dhismeedka sare ee Linux®, koorsadan 4-maalin si cad waxay hoosta ka xariiqdaa layliyada ku salaysan labka. Waxaad ogaan doontaa sida loo diro oo loo kormeero awoodda la wadaago iyo rukumo adeegsi oo bixiya nidaamyo nidaamsan oo la heli karo si loo helo jawi-hawleed aasaasi ah.
Koorsadani waxay sidoo kale kaa caawineysaa inaad qorsheyso shahaadada Red Hat Certificate of Exit ee imtixaanka Xiriirka Hore (EX436).
Muuji jaantuska sida loo soo saaro server-ka Red Hat Satellite oo ka faa'iideynaayo dirista iyo kormeerida qaababka. Red Hat® Enterprise Deployment and Management Systems waxay baartaa fikradaha iyo farsamooyinka muhiim u ah ururada miisaanka leh ee ballaaran iyo maamulka maamulka Red Hat Enterprise Linux®.
Koorsadani waxay ku taal Red Hat Satellite 5.
Understudies waxay ogaan doontaa sida loo soo saaro loona isticmaalo adeegga Red Hat Satellite oo leh horumarinta mudnaanta si looga jawaabo si loo gudbiyo loona ilaaliyo qaababka. Ka hor dhamaadka koorsadan, fahamadu waxay soo saari doonaan xirmooyinkooda gaarka ah ee RPM waxayna isticmaali doonaan Subversion si ay u kormeeraan isbedelada diiwaanada. Koorsadani waxay sidoo kale kaa caawin kartaa inaad qorsheyso shahaadada Red Hat Shahaadada Khibrada ee Maareynta iyo Maareynta Qalabka (EX401).
Jaantus sida loo soo saaro Red Hat Satellite 6
Red Hat Satellite 6 (RH403) waa koorso ku salaysan shaybaarka oo baaraya fikradaha iyo farsamooyinka muhiim u ah maareynta miisaanka weyn ee Red Hat® Enterprise Linux®. Xubnaha koorsada waxay qiyaasayaan sida loo soo saaro Red Hat Satellite 6 oo ku yaala server oo ku dhajiya xirmooyinka barnaamijyada.
Koorsadani waxay kuxirantahay Red Hat Enterprise Linux 7 iyo Red Hat Satellite 6.
Understudies waxay isticmaali doontaa Red Hat Satellite si ay ula macaamilaan wareegga nolosha wax soo saarka wax soo saarka ee marti-geliyaha iyo naqshadeynta, iyo in la ogaado sida laysugu duba-galiyo barnaamijka iyo maamulka kuraasida markii loo diro.
Soo qaado waxa loo baahan yahay in loo diro oo kormeero xaaladaha farsamada. Red Hat Virtualization (RH318) wuxuu hagayaa guddoomiye khibrad leh oo khibrad u leh sida loo isticmaalo qaybaha farshaxanka ee Red Hat® Enterprise Linux® kormeerka iyada oo loo marayo suugaanta Red Hat Virtualization.
Understudies waxay helayaan macquul ah iyo macluumaad si ay u sameeyaan, u diraan, kormeeraan, una dhaqaajiyaan mashiinada farsamooyinka farsamada Linux si ay uga shaqeeyaan labada xarumood ee Red Hat Virtualization Hypermisor hub ama Red Hat Enterprise Linux oo isticmaalaya Maareeyaha Casriga ee Red Hat.
Koorsadani waxay sidoo kale ka caawisaa tartamayaasha inay u diyaargaroobaan imtixaanka maamulaha Red Hat Virtualization Officer (EX318), taas oo, haddii la ansixiyo, waxay soo iibsadaa Maamulaha Maamulka Casriga ee Red Hat Certified (RHCVA).
Jaantus sida loo maamulo Red Hat Ceph Storage iyo iskuduub oo leh Red Hat OpenStack Platform. Nidaamka Casriga ee Red Hat® Ceph iyo Cift (CEPH125) waa qayb ka mid ah habka tiknoolajiyada casriga ah ee koorsooyinka ka yimid Red Hat Training. Koorsadan shanta maalmood ah waxaa loogu talagalay guddoomiyeyaasha awoodda ama maamulayaasha daruuriga ah ee u baahan inay u soo diraan Red Hat Ceph Storage iyagoo ku jira hareerahooda ku hareeraysan iyo sidoo kale deegaanadooda OpenStack®.
Nidaamka Casriga Cabbirta Cas ee Red Hat Cache iyo Maamulka (CEPH125) wuxuu ku dhisan yahay hareeraha 3. Muuqaalka koowaad ee gudaha ayaa ah gudaha iyo dibedda casriga ah ee Red Hat Ceph Storage engineering wuxuuna siinayaa tilmaamo lagu soo gudbiyo Red Hat Ceph Storage, oo ay ku jiraan Ceph Storage Cluster, Ceph Object Gateway iyo Ceph Block Device. Qaybta labaad waxay xoojineysaa hawlgallada maalinlaha ah ee Ceph Storage Khariidada oo ay la socdaan qaar ka mid ah istaraatiijiyooyinka aasaasiga ah ee baaritaan iyo istiraatiijiyadeed ee awooda kormeerayaashu isticmaali karaan si loo siiyo 24 × 7 habka kartida. Qaybta sadexaad waxay dabooleysaa isku-duwaha Cef-ka-qabashada Kalkaaliyaha ee Glance iyo Cinder-ka ee Red Hat OpenStack Platform. Qeybtaani waxay ku saabsantahay qorsheynta Red Hat Ceph Storage sida swift oo ay isku duwo Keystone.
Jaantus sida loo sameeyo, loo naqshadeeyo, u isticmaalo, iyo hannaanka "Red Hat OpenStack Platform". Red Hat OpenStack I (CL110) waxaa loogu talagalay hoggaamiyeyaasha qaab-dhismeedka kuwaas oo soo jeedinaya in ay fuliyaan bay'ad xisaabeed loo qaybiyey iyadoo la isticmaalayo Red Hat OpenStack® Platform.
Koorsadani waxay fahmaysaa fahamka inay soo saaraan fikrad caddayn ah, qabanqaabiso, adeegsato, iyo hirgelinta "Red Hat OpenStack Platform". Koorsadani waxay daboolaysaa maamulada xarumaha: shakhsi (Keystone), duubista dukaanka (clam), sawir (Glance), abaabulid (Neutron), sawir iyo kantaroole (Nova), iyo qaabka (Horizon).
Soo bandhig, samee, kuna sii wad jawi degaan oo loo isticmaalo Isticmaalka Red Hat OpenStack Platform. Koorsadani waxay muujineysaa shuruudaha kormeerayaasha sida loo sameeyo jawi xisaabeed oo loo qeybiyo isticmaalka Red Hat® OpenStack® Platform, oo ay ka mid yihiin aasaaska, dejinta, iyo hagaajinta.
Red Hat OpenStack II (CL210) sidoo kale waxay bilaabi doontaa inay ka bilawdo maareynta OpenStack iyadoo la isticmaalayo Horizon si ay u isticmaasho isku-xirka khadka taleefanka gacanta. Xirfadaha imtixaanka lagu daboolo koorsada waxaa ka mid ah: naqshadeynta Red Hat OpenStack Platform oo isticmaalaya Agaasimaha OpenStack, kormeerida macaamiisha, hawlaha, dhadhanka, qaybaha, sawirada, maamulka nidaamka, iyo duubista duullimaadka, kombiyuutarka (kor u qaadida iyo hoos udhaca), iyo dhis sawir jajaban.
Muuji jaantuska sida loola shaqeeyo nashqad hoose iyo qaabka Red Hat CloudForms. Red Hat CloudForms Maamulka Hiddaha (Hybrid Cloud Administration) (CL216) ayaa ku tusaya sida loo qaabeeyo loona isticmaalo Red Hat CloudForms.
Understudies waxay ogaan doontaa sida loo ciyaaro qaabka hoose ee CloudForms, oo ay ka mid yihiin Red Hat Enterprise Enterprise, fulinta baaritaanada iyo qorsheynta joogtada ah, mashiinnada mashiinada (VMs), iyo bixiyaan warbixino kala duwan.
Jaantus sida loo isticmaalo Red Hat CloudForms qalabka fekerka. Red Hat CloudForms Hawlgallada Hiddaha ee Hybrid (CL218) ayaa ku tusaya sida loo isticmaalo qalabka loo yaqaan Red Hat CloudForms. Understudies waxay ogaan doontaa sida loo kobcin karo farshaxanimada, dejinta awooda qiyaasidda, qorsheynta iyo faa'iidooyinka, iyo alaarmiga naqshadeynta.
Ku dhaqan Apache Qpid sidii kaalmayn madaxbannaan ama qayb ka mid ah Red Hat Enterprise Linux OpenStack Platform. Apache Qpid Messaging oo leh Red Hat® Enterprise Linux® OpenStack®Platform (CL314) ayaa loogu talagalay maamulayaasha maaraynta, darawallada, iyo kuwa daruuriga ah ee qorsheynaya in ay hirgeliyaan Apache Qpid oo ah kaalmada asaasiga ah ama qayb ka mid ah Red Hat Enterprise Linux OpenStack Platform.
Actualize RabbitMQ sida kaalmada asaasiga ah ama qayb ka mid ah Red Hat OpenStack Platform.
Koorsadani waxaa loogu talagalay guddoomiyeyaasha qaab-dhismeedka, hogaamiyayaasha daruuraha, iyo maamulayaasha daruuriga ah ee macnahoodu yahay in ay fulinayaan RabbitMQ oo ah kaalmada asaasiga ah ama qayb ka mid ah Red Hat OpenStack Platform.
RabbitMQ Macmiilka oo leh Red Hat OpenStack Platform waa qayb ka mid ah habka cusub ee cusub ee koorsooyinka ka yimid Red Hat Training. Kobcinta kobcinta casriga waxay muujineysaa oo faa'iido ufidoontaa oo waxa loola jeedaa shaybaar la hagayay.
Qaado wax dheeraad ah oo ku saabsan aalado badan oo la heli karo iyo aaladaha Red Hat OpenStack Platform.
Helitaanka Habboon ee loogu talagalay Red Hat® OpenStack® Platform (CL332) ayaa loogu talagalay maamulayaasha maareynta iyo maamulayaasha daruuriga ah ee keenaya helitaanka sarreeya ee loogu talagalay Red Hat OpenStack Platform. Koorsadani waxay ku siinaysaa qulqulaad aad u qoto dheer oo ah qaybaha iyo qalabka sareeya ee ka sarreeya koorasyada Red Hat OpenStack (CL210).
Koorsadani waxay isticmaashaa kumbiyaadka ugu sareeya ee furfuran iyo nidaamyo badan oo la heli karo oo la heli karo waxayna siinaysaa qorshe aad u dheer si ay ula macaamilaan Barnaamijka Red Hat OpenStack Platform. Understudies waxay fulin doontaa mid kasta oo ka mid ah maamulayaasha si habsami ah loo heli karo iyo tijaabooyin xaalado goosan. Understudies waxay isticmaali doonaan Pacemaker, Corosync, qalabka CMAN, iyo HAProxy si ay u fuliyaan kooxo iyo aaladaha kale ee la gaari karo.
Samee, tijaabi, oo hayso Java EE-ku waafaqsan codsiyada laga bilaabo bilowga ilaa dhammaadka
Lagu soo jeediyay heerarka heerarka dhexe ee Java ™, JBoss® Development Development Enterprise (JB225) ayaa ku ogeysiinaya dhismayaasha Java EE 6, faahfaahinta, iyo dhexdhexaadinta barnaamijka codsiyada (API).
Samee, tijaabi, hirgelinta codsiyada Java EE-joogto ah
Jaantus sida loo sameeyo, tijaabiyo, iyo hirgelinta codsiyada Java EE-ga laga bilaabo bilawga illaa dhammaadka isticmaalka Istaraatada Isticmaalka Red Hat® JBoss Developer Studio.
Samee codsi dhammaystiran oo wax ku ool ah oo Java ah
Cinwaanada aad u gaarsiisan tahay iyo kiisaska ballaadhan ee isticmaalka, shaybaarka gacmaha ayaa ku ogaanaya horumarinta dalabka ganacsiga weyn ee ka faa'iideysanaya Red Hat JBoss Enterprise Application 6, Xudduudaha iyo Ku-tiirsanaanta I, Arquillian, JBoss Hibernate, RESTEasy, HornetQ, iyo horumarinta kale ee la xidhiidha si dhammaystiran codsiga jaangooyada ah ee Java.
Dufac wadajir ah, codsi badan oo badan
Muuqaal ahaan sida loo dhajiyo wadarta guud, codsiyo badan oo ficil ah oo tilmaamaya JavaServer Faces (JSF) 2 dhamaadka internetka, Java API ee lakabka Adeegyada Websaydhka ah (JAX-RS), lakabka mashruuca JavaBeans (EJB), iyo Joogsanaanta Java (JPA) lakabka jilicsanaanta, isticmaalka habka ugu fiican-qorista, codeynta, iyo nidaamka imtixaanka.
Meel Hal Xoog Leh oo Kantarooli Karo, Maaree, Kormeer Kootadaada Cas Jboss Shirkadaha Dhismayaasha Qalabka, Barnaamijyada, iyo Adeegyada.
Red Hat JBoss Operations Network, qayb muhiim ah oo ka mid ah deeqda kormeerka ee Red Hat JBoss, ayaa ka shaqeeya maamulka iyo hubinta awoodda si guul leh loo maareeyo xaaladaha codsigaaga Red Hat JBoss, kaa caawinaya inaad kobciso wax soo saarka waxtarka, hoos u dhigo kharashka, iyo damaanad qaadka Dhibaatada macaamiishaada dhammaadka.
Red Hat JBoss Operations Network, qaybta muhiimka ah ee Red Hat JBoss Supply offerings, waxay siisaa shaqo ka shaqeynta iyo hubinta awoodda si ay ufilan ugu noqoto qaybta weyn ee xaaladaha codsigaaga Red Hat JBoss, kaa caawinaya inaad kobciso wax soo saarka, hoos u dhimi kharashyada, iyo damaanad qaadka macaamiisha ugu dambeeya ee macaamiishaada dhammaadka ah.
Horumarinta Horumarinta Adeegyada Farsamada Adeegga Fudud ee Red Hat JBoss wuxuu qabaa dib-u-eegista Adeegyada Fayadhowrka ee Adeegyada Fayadhowrka JBoss iyo sida Beddelka Lacagtu ku haboon tahay qaybaha ay ka kooban tahay, oo lagu sawiray qaybo ka mid ah qaybo kala duwan oo Isbedel ah oo la bixiyo si loo fududeeyo isticmaalka faa'idada, oo ay ku jiraan JavaBean, Camel, Sharciyada, iyo Ganacsiga Habka Habka iyo Ogolaanshaha (BPMN). Tani waxaa lagu gartaa sawirka iyo isticmaalida albaabo badan iyo xiriiro kuwaas oo u oggolaanaya injineerada in ay iskaashi ka sameeyaan jawiga Beddelka iyo "adduunka dibadda." Tusaalooyinka ka mid ah gelitaanka / xiriirka waxay ku dhex jiraan HTTP, SOAP, SQL, REST, wargelinta (JMS), boostada, iyo taasi oo ah cirifka jilitaanka. Mawduucyadan soo socda ayaa ku jira isticmaalka Isticmaalayaasha iyo Beddelidda si ay u helaan farriin fariin ah sida koorsooyinka iyada oo loo marayo xaalad isku dhafan, iyo weliba in lagu daro hababka baaritaanka / xallinta dhibaatooyinka. Amniga waxaa lagu daboolayaa qeyb ka duwan kooraska.
Jaantus saar sida loo abuuro, wax u dhaco, tijaabiyo, una diro naqshado isku dhafan oo isku dhafan (EIP) - oo isticmaalaya geela "Apache".
Horumarka geelka ee Red Hat® JBoss® Fuse (JB421) waa kumbuyuutar, koorso shaybaar ah oo siinaya naqshadaha Java ™ iyo qorsheeyayaasha fahamka geela "Apache Camel" iyo casriyeynta iyo qalabka Red Hat ayaa bixiya taageerada horumarinta geela.
Horumarka geela ayaa loo kala soocayaa:
Koorsooyin muujinaya qaabeyn ama koox socod ah oo loo marayo ugu yaraan hal shaqeeye iyo dhameeysi
Geedi-socodka dib-u-soo-celinta, dib-u-hagaajin, iyo beddelidda farriimaha gudaha geela geela.
Qaybaha awood u leh in ay samaystaan ​​meelo udubdhexaad ah oo iskaashi la leh dunida dibadda si ay u soo iibsadaan una gudbiyaan fariimaha.
Muujiyaan sida loo galo habka waxqabadka shaqada ee codsiyada ganacsiga.
Abuurista Codsiyada Shaqada ee Red Hat® JBoss® BPM Suite (JB427) ayaa loogu talagalay injineeriyeyaasha iyo qorsheeyayaasha doonaya inay xoojiyaan habka waxqabadka shaqada ee codsiyada ganacsiga.
Iyada oo la adeegsanayo shaybaar gacmeed, fahamku wuxuu ku qaadan doonaa injineernimada iyo walxaha Red Hat JBoss BPM Suite, habka lagama maarmaanka u ah ganacsiga (BPMN 2.0), iyo dib u heshiisiinta geedi socodka shaqada ee Java ™ SE iyo Java EE. Si kasta oo aan u sameyno codsiyada habka shaqada, fahamka wuxuu fahmi doonaa sida loola shaqeeyo baaritaanka iyo codsiyada codsiyada isticmaalaya Red Hat JBoss Developer Studio. Understudies fahmi doonaan sida loo soo diro habraaca ganacsiga iyo muujiyaan gobolka runtime.
Gaadiidka Adeegga Xirfadaha Baska ee Red Hat Joogayaasha Fuseeyaashu waxay ku qaadan doonaan qaababka loo baahan yahay inay kormeeraan, soo diraan, iyo dib u eegaan Red Hat JBoss Fuse iyo dhisida fikradaha dhexe ee codsiyada ku salaysan OSGi ee ka faa'iideysanaya qaybta FATS ee Qalabka Fuse, oo ay ka mid yihiin: kormeer ... Arag
Soo bandhig, samee, kormeerto, oo u soo dir codsiyada OSGi
Baska Adeegga Wareega (ESB) Ku-wareejinta Red Hat® JBoss® Fuse waa koorso gacmeed oo siinaysa Maamulayaasha Isku-duwaha iyo mashiinnada Java ™ fahamka Red Hat JBoss Fuse, wareega industrially-up of Apache ServiceMix.
Ka qaybgalayaashu waxay qaadan doonaan awoodaha looga baahan yahay inay kormeeraan, soo diraan, ayna dib u eegaan Red Hat JBoss Fuse iyo dhisaan fikradaha dhexe ee codsiyada ku salaysan OSGi iyagoo isticmaalaya faallooyinka Red Hat JBoss Fuse, oo ay ku jiraan:
Ururka iyada oo la adeegsanayo Fuse Fabric, Hawt.io, iyo Red Hat JBoss Developer Studio
Si dhakhso ah ula soco kormeerka JBoss Fuse, JBoss AM-Q, iyo Geel Apache
Red Hat® JBoss® Fuse Tracked Track (JB439) waa koorso 5 ah oo siinaya Java ™ horumarinta, moodarayaasha, iyo gudoomiyayaasha Red Hat JBoss Fuse fahamka Red Hat JBoss Fuse, Red Hat JBoss A-MQ (Ganacsiga Adeegga Macmiilka Java ), iyo Geel Apache.
Qaado qaabka aad u leedahay inaad sameysid oo aad fuliso qaabeynta naqshadeynta (EIP) ee adeegsiga geela, iyo inaad aragto sida loo gudbin karo EIP-yada Red Hat JSB ee Fuse - Faa'iido faaiido leh (ESB) oo ku saleysan Apache ServiceMix. Intaas waxaa sii dheer, inaad ogaatid sida loo isticmaalo Red Hat JBoss A-MQ-ah wargelin ku saabsan qaabka loo yaqaan 'Apache Geel'.
Jaantus sida loo qaabeeyo ilaha macluumaadka iyo walxaha fure, tusaale ahaan, miisaska, aragtiyaha, iyo nidaamyada.
Kobcinta Macluumaadka Red Hat® JBoss® waxay muujineysaa injineeriyada xogta iyo kormeerayaasha sida loo qaabeeyo ilaha macluumaadka iyo walxaha fure, tusaale ahaan, miisaska, aragtiyaha, iyo istaraatijiyadaha. Iyada oo la adeegsanayo shaybaar gacmeed, faham-yaqaanka ayaa fahmi doona sida loo soo diro arrimahan farsamooyinka ah ee JDBC iyo isticmaalka faa'idada shabakada. Koorsadani waxay sidoo kale caawimi karaan tartamayaasha si ay u qorsheeyaan shahaadada Red Hat Shahaadada Aqoonyahanada (EX450).
Jaantus sida loo soo saaro qoraallada macluumaadka, sameyso codsi ku salaysan hannaan, farabadan iyo dukaamo ammaan ah, iyo cirka ayaa ah xadka halkaas ka jira.
Horumarinta Qorshaha Macluumaadka Red Hat® JBoss® (JB453) wuxuu diirada saaraa hannaanka kaydka iyo xakamaynta qaybaha dukaanka. Understudies waxay qeexi doontaa sida loo dukaameysto maktabadda iyo hababka fog (qallafsan iyo kuwa aan la isku dhejin). Sidoo kale, fahamku waxay fahmi doonaan sida loo hubiyo qaabka macluumaadka, qaylo waraaqaha warbixinta, iyo ugaarsiga shabakadda macluumaadka.
Sameey sida loo abuuro loona tijaabiyo xeerarka isticmaalaya garaafka garaafka ee Ganacsi Dhexe.
Qorista Xeerarka leh Red Hat® JBoss® BRMS (JB461) waxay fahmeysaa fahamka Red Hat JBoss BRMS qawaaniinta iyo wareegga. Koorsadani, fahamku waxay muujinayaan sida loo abuuro loona tijaabiyo xeerarka isticmaalaya garaafka Gacan ee Ganacsiga Dhexe.
Koorsadani waxay kuxirantahay Red Hat JBoss BRMS 6.
Isku dhafan ee Sharciyeynta Qorista (JB461) iyo Codsiyada Xeerarka Koritaanka ee Red Hat JBoss BRMS (JB463).
Natiijada la xiriirta Red Hat® JBoss® BRMS waxay xoojineysaa shuruudaha qoraallada sharciyada ee Red Hat JBoss BRMS (JB461) iyo Codsiyada Xeerarka Koritaanka ee Red Hat JBoss BRMS (JB463). Waxay muujinaysaa imtixaannada ganacsiga, maaraynta naqshadayaasha, iyo injineerada codsiyada macaamiisha Java ™ sida loo sameeyo, tijaabiyo, baaro, iyo xakamaynta shuruucda ganacsiga.
Understudies waxaa la siiyaa dhibco, hawlo gacmeed oo adeegsanaya Red Hat JBoss Developer Studio iyo Red Hat JBoss BRMS kuwaas oo loogu talagalay in ay bixiyaan fursad ay ku sameeyaan oo ay kormeeraan ganacsiyada ganacsi ee xaalad abuuris. Koorsadani waxay sidoo kale kaa caawin kartaa inaad u diyaargarowdo Shahaadada Khabiirka ee Red Hat ee Imtixaanka Sharciyada Ganacsiga (EX465).
U samee kartidaada adoo isticmaalaya koorso gacmeed oo isku duwaya codsiyada horay iyo gadaalba
Sameynta Codsiyada Macaamiisha Casriga ah (JB501) waa qayb ka mid ah koorsooyinka injineerka Red Hat® JBoss®. Koorsadu waxay kuxirantahay falanqayn xaddidan. Waa koorso gacmeed oo kor u kaca ah, halkaas oo ay fahmayaan isku-duwaha codsiyada hore iyo kan dambe.
Koorsadu waxay kuxirantahay falanqayn xaddidan. Qaar ka mid ah alaabooyinka Red Hat Middleware waxaa loo isticmaalaa qorshaha sida Red Hat JBoss Data Grid, Red Hat JBoss Enterprise Application Platform, Red Hat JBoss BPM Suite, Red Hat JBoss Fuse iyo Red Hat JBoss A-MQ. Maskaxaha ayaa isticmaali doona Java ™ EE 6, Java Standstation API (JPA), foomamka ganacsiga, sharciyada ganacsiga, koorsooyinka geela, keydinta, iyo kuxirida dib u heshiisiinta. Si joogto ah, isdhexgalka qaab-dhismeed ee la xiriira qorshaha, sida ay u shaqeeyaan nidaamka ugu dambeeya. Fahamsanaanta waxaa lagu tiirsanaanayaa in uu horay u barto iyo awoodda aasaasiga ah ee alaabooyinka loo isticmaalo.
U dir siinta la qabsashada, la heli karo oo la heli karo qalabka xiran iyo xaaladaha dariiqa.
Koorsadani waxaa loogu talagalay qaab-dhismeedka waayeelka iyo madaxda sare ee doonaya in ay u diraan la qabsashada, awoodda aadka u kordhi kara qalabka xiran iyo xaaladaha dariiqa.
Koorsadani waxay kuxirantahay Red Hat Gluster 3.
Understudies waxay qeexi doontaa sida loo soo saaro, loo habeeyo, iyo loo sii wado kooxo Red Hat Storage servers. Koorasku wuxuu sidoo kale baari doonaa qaabka rikoodhka internetka ee ugu weyn ee la heli karo (CIFS) iyo qaabka dukumiintiga nidaamka (NFS) ee Isticmaalaya Xogta Iskudhafan ee Qarsoodiga ah (CTDB), waxay isu keeneen rikoodh iyo diidmo soo saarid, iyo dib-u-guurin. Waqtiga ugu dambeeya, fahamka waxaay ka ogaan doonaan habka Hadoop ee loogu talagalay Red Hat Storage, hor-u-marinta, iyo dib-u-dejinta.
Koorsadani waxay kaa caawin kartaa inaad u diyaargarowdid Shahaadada Red Hat Shahaadada Khibrada ee Hooska Xajinta Kaydka ee Hybrid (EX236).
Jaantus sida loo gudbiyo, kormeerka, iyo hirgelinta awooda iyo OpenStack.
Barnaamijka Red Hat OpenStack III (CL310) wuxuu si ballaadhan gacmaha u siiyaa inuu u diyaargaroobo kormeerayaasha qaabdhismeedka khibrada leh ee sida loo isticmaalo qaybaha loo yaqaan "Red Hat® Ceph Storage" iyo awoodaha maamulka nidaamka ee OpenStack® Neutron. Understudies waxay dejin doontaa xaalad Ceph iyo naqshadeeda sida dhammaadka dambe ee OpenStack, iyo qabanqaabiyo iyo ka faa'iideysiga qaybaha dabacsan ee OpenStack Neutron.
Koorsadani waxay kuxirantahay Xawaarida Red Hat OpenStack 6.
Understudies waxay abuuri doontaa aagga Ceph iyo nidaamkeeda dhammaadka dambe ee loogu talagalay OpenStack, iyo naqshadeynta iyo isticmaalka qaybaha dabacsan ee OpenStack Neutron.
Shahaadada RHCE - Sida loo noqdo Engineer Red Red Certified
Tilmaamaha Shahaadada Red Hat